पिसाब रोक्ने समस्या छ ? होसियार ! पिसाबथैलीमा आउनेछ खतरनाक समस्या - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
उमेर अनुसार व्यक्तिलाई पिसाब लाग्ने भएता पनि कम्तिमा प्रत्येक ३ घण्टामा एक पटक पिसाब लाग्ने अवस्थालाई सामान्य मानिन्छ । व्यक्तिको उमेर अनुसार पनि कति समयमा पिसाब लाग्ने भन्ने हुन्छ । ब्ल्याडर (पिसाबथैली)को सिधा सम्बन्ध मस्तिष्कसँग हुने तथ्य विभिन्न अध्ययनहरुले पुष्टि गरेको छ । त्यसैले पनि यदि तपाईको ब्लयाडर रिसेप्टर्स भरिएको छ भने तपाईको मस्तिष्कले तपाईलाई जानकारी दिन्छ र पिसाब लागेको थाहा पाउनु हुनेछ ।
तर कतिपय अवस्था तथा परिस्थितिका कारण व्यक्तिहरु पिसाब लाग्दा लाग्दै पनि बेवास्ता गरेर पिसाब रोकेर बस्छन् । यसले उनीहरुमा कालान्तारमा गएर नकरात्मक प्रभाव पार्दछ । त्यसैले, पनि पिसाब रोक्नु व्यक्तिको स्वास्थ्यको निम्ति हानिकारक मानिन्छ । पिसाब रोक्नाले स्वास्थ्यमा यस्ता समस्या देखा पर्नसक्छ:
१. यदि तपाईले आफ्नो पिसाबथैली पटक पटक खाली राख्नु भएन भने र यो क्रम निरन्तर २ दिन चलेमा यसबाट तपाईमा पिसाबनली संक्रमण हुने जोखिम उच्च रहन्छ । २.पिसाब रोकेको खण्डमा यसले पिसाबथैलीमा एट्रोफिको शुरु हुन्छ । र, यसलगत्तै तपाईमा असंयमित हुने बानीको विकास समेत हुन पुग्छ ।
३. १० घण्टाभन्दा बढि पिसाब रोक्नुहुन्छ भने तपाईको पिसाबथैलीले प्रतिधारण विकास गर्दछ । यसको अर्थ तपाईको मुत्राशयको मांसपेशीलाई आराम नमिल्ने हुदा तपाई आफूले चाहे पनि पिसाब गर्न नसक्ने वा आफूलाई यसबाट राहत दिन नसक्ने हुनुहुन्छ । ४.कतिपय अवस्थामा पिसाब रोक्नाले पिसाबथैली फुट्ने सम्भावना समेत हुन्छ ।